हरियो धुने, एक "हरियो" मार्केटिङ अभ्यास | बेजिया
ग्रीनवाशिङ, एक "हरियो" मार्केटिङ अभ्यास
मारिया vazquez | 14/05/2022 10:00 | समाचार
के तपाईं आफ्नो उपभोग बानीहरू थप दिगोका लागि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ? सायद बाटोमा तपाईसँग यो वा त्यो उत्पादनको लेबलले तपाईलाई बेच्न खोजेको कुराको सत्यतासँग सम्बन्धित धेरै शंकाहरू हुनेछन्। र यो हुन अपेक्षाकृत सजिलो छ हरियो धुने को शिकार।
कम्पनीहरू सधैं आफ्नो मा निष्पक्ष खेल्दैनन् विपणन रणनीतिहरू। केही अध्ययनहरूले दावी गर्छन् कि "हरियो" को रूपमा परिभाषित उत्पादनहरू मध्ये केवल 4,8 ले वास्तवमा विशेषताहरूलाई प्रतिक्रिया दिन्छ। तिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने र हरियो धुने विरुद्ध कार्य गर्ने?
1 ग्रीनवाशिङ भनेको के हो?
2 यसलाई कसरी पत्ता लगाउने?
2.1 घोटालाहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्
ग्रीनवाशिङ भनेको के हो?
सुरुमा सुरु गरौं। हरियो धुने भनेको के हो? छोटकरीमा, हामी भन्न सक्छौं कि यो एक हो हरियो मार्केटिङ अभ्यास यी सेवाहरू वा उत्पादनहरू उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूको संवेदनशीलता र नैतिकताको फाइदा उठाउँदै, पारिस्थितिक जिम्मेवारीको भ्रामक छवि सिर्जना गर्ने गन्तव्य।
अंग्रेजी हरियो (हरियो) र धुने (धुने) बाट आएको शब्द नयाँ होइन। कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको विश्वकोशका अनुसार यो थियो पर्यावरणविद् जे वेस्टरवेल्ड जसले 1986 को निबन्धमा यो शब्द बनायो, त्यसपछि होटल उद्योगलाई सन्दर्भ गर्न।
यसलाई इको ह्वाइटिङ, इकोलोजिकल वाशिङ वा इको इम्पोष्टर, ग्रीनवाशिङ पनि भनिन्छ जनतालाई भ्रमित गर्ने, कम्पनी, व्यक्ति वा उत्पादनको वातावरणीय प्रमाणहरूलाई जोड दिँदै जब यी अप्रासंगिक वा आधारहीन हुन्छन्।
यो खराब अभ्यास जुन धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो छवि सफा गर्न र ग्राहकहरू प्राप्त गर्नको लागि आजको सहारा लिने महत्त्वपूर्ण परिणामहरू छन् जसले उपभोक्ता, बजार र अवश्य पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
धारणा को त्रुटि को नेतृत्व उपभोक्तामा र सकारात्मक वातावरणीय संस्कृति निर्माण गर्न उपभोक्ताको इच्छाको फाइदा लिनुहोस्।
विज्ञापित लाभ मात्र हुँदैन, तर ठूलो प्रभाव उत्पन्न गर्दछवा खपत बढाएर।
यो अन्य कम्पनीहरु को लागी हानिकारक छ, किनभने अनुचित प्रतिस्पर्धा निम्त्याउँछ, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संग असंगत।
यसलाई कसरी पत्ता लगाउने?
हरियो धुनेबाट बच्नको लागि, तपाईंले यसलाई कसरी पहिचान गर्ने भनेर जान्न आवश्यक छ। पारिस्थितिक जिम्मेवारी वा दिगोपनको यो धारणा उत्पन्न गर्न कम्पनीहरूले कुन रणनीतिहरू प्रयोग गर्छन्? तिनीहरूलाई थाहा पाउँदा हामीलाई केही सन्देशहरूमा थप ध्यान दिन र सतर्क हुन मद्दत गर्नेछ।
"प्राकृतिक", "100% इको" र "bi(o)" बाट सावधान हुनुहोस्।। यदि उत्पादनले यी प्रकारका दावीहरूलाई हाइलाइट गर्दछ र विस्तृत व्याख्याको साथमा छैन भने, संदिग्ध हुनुहोस्। जब उत्पादन साँच्चै जैविक हुन्छ, यसले यसको सामग्री र उत्पादन विधिहरूमा विस्तृत र स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्न संकोच गर्दैन।
अस्पष्ट भाषाबाट बच्नुहोस्। अर्को साझा रणनीति भनेको सर्तहरू वा शब्दहरू प्रस्तुत गर्नु हो जसले दिगो वा वातावरणीय फाइदाहरूलाई संकेत गर्दछ तर स्पष्ट अवधारणा वा आधार बिना।
रंगले तपाईंलाई मूर्ख नदिनुहोस्: तिनीहरूको लेबलहरूमा हरियो अपील गर्ने ती कम्पनीहरूमा सामान्य छ जसले तपाईंलाई दिगोपन र वातावरणको हेरचाहसँगको सम्बन्धको बारेमा विश्वस्त पार्न चाहन्छ। निस्सन्देह, किनभने उत्पादनले हरियो रंग प्रयोग गर्दछ, तपाईंले अब सोच्नु हुँदैन कि त्यहाँ छल छ, तर यो छनोट गर्न पर्याप्त छैन।
हरियो कारणलाई समर्थन गर्न होइन यो हरियो छ। न त यो पर्याप्त छ कि कम्पनीले कम्पनीको उत्पादन वा उत्पादन प्रणाली हो भनेर ग्यारेन्टी गर्न वातावरणको लागि लड्ने संगठनलाई समर्थन गरिरहेको छ।
एकचोटि मुख्य रणनीतिहरू थाहा भइसकेपछि, धोकामा नपर्नबाट बच्ने उत्तम तरिका हो लेबलहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र उत्पादन को संरचना विच्छेदन। हामीले खोजिरहेको जानकारी लेबलमा छैन भने के हुन्छ? त्यसपछि तपाइँ यसलाई तिनीहरूको वेबसाइटमा खोज्न सक्नुहुन्छ। संदिग्ध हुनुहोस् यदि यो त्यहाँ छैन भने; स्पष्ट र सटीक जानकारीको अभाव सामान्यतया सतर्कताको कारण हो।
लेबलहरू पढ्दा यो जान्न ठूलो मद्दत हुनेछ तेस्रो पक्ष प्रमाणीकरण संलग्न छैन। सबै टिकटहरूको समान मूल्य हुँदैन; स्पेनी र युरोपेली स्तरमा ग्यारेन्टीहरू प्रस्ताव गर्नेहरू खोज्नुहोस्। हामीले बेजियामा पहिले नै यसको बारेमा बोलेका छौं कपडा प्रमाणपत्र र हामी वातावरणमा सीमित प्रभावको ग्यारेन्टी गर्ने अन्य युरोपेली इकोलाबल्स भन्दा अगाडि त्यसो गर्ने वाचा गर्छौं।
दिगो कपडा प्रमाणपत्र कि तपाइँ जान्नु पर्छ
घोटालाहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्
जब तपाइँ एक होक्स पत्ता लगाउनुहुन्छ, यसलाई अनुमान नगर्नुहोस्, रिपोर्ट गर्नुहोस्! तपाइँ यसलाई सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै कम्पनी भित्र र पक्कै पनि एक उपभोक्ताको रूपमा उपभोक्ता संरक्षण संगठनहरू.
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » ग्रीनवाशिङ, एक "हरियो" मार्केटिङ अभ्यास
कसरी आफ्नो बच्चालाई कपबाट पिउन सिकाउने